Taratasim-baovao RV: Folo taona ho an’ny fiteny Indizeny · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-baovao RV: Folo taona ho an'ny fiteny Indizeny
Voadika ny 12 Janoary 2022 14:15 GMT
Âsônamâkêwin ~ Mampita izany, Hal Cameron, fampitam-baovao mifangaro (c) 2018. “Ny fanafoanana ny fiteny indizeny no ampahany fototra amin’ny fanjanahantany sy ny fampidirana anaty kolontsaina hafa. Firenena maro ankehitriny no mampianatra ny tanorany sy ny hafa ny fiteniny izay efa nisy” (veritatem, CC BY 2.0)00
Fanamarihan'ny Rising Voices: Manome famintinana ireo lahatsoratra bilaogy vao haingana miresaka momba ny lafiny rehetra mahakasika ny fampiatiana ankihy toy ny fidirana sy ny fampiasana fitaovana ankihy, ary ny fomba sy hirika samihafa ho an'ny vondrom-piarahamonina handray anjara feno amin'ny aterineto ny taratasim-baovaontsika isam-bolana. Vakio eto ny fanontana teo aloha amin'ity gazety ity.
Miarahaba anareo mpamaky, inona no nataonareo hanokafana ny taona?
Miditra amin'ny fomba ofisialy amin’ny Taompolo Iraisam-pirenena ho an’ny Fiteny Indizeny 2022–2032 isika, ka tianay ny mizara aminareo ny tatitra famintinana ny fiaraha-midinka vao haingana tao amin'ny Dinika Fitantanana ny Aterineto – Internet Governance Forum 2021 – momba ny Manangana amin'ny fomba Wiki ho an'ny fiteny tsy ampy fitaovana. Amin'ity tatitra ity, hanovo hevitra fohifohy momba ireo fanamby lehibe atrehin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fiteny tsy ary fitaovana ianareo amin'izao vanim-potoana ankihy izao. Hianatra momba ny tolo-kevitra avy amin'ireo mpandray anjara fitenenana mikasika ny hetsika tokony hatao amin'ny famahana ireo olana ireo koa ianao.
Te hizara ny hevitrao aminay ve ianareo? Azonareo atao izany amin'ny fanombohana ny resaka eto ambany.
BEBE KOKOA AVY AMIN'NY BILAOGIN'NY RISING VOICES
Amin'ity laharana ity, tianay koa ny hizara aminareo fa ny Kiswahili (na ny Swahili) — fiteny avy any Afrika Atsinanana sy Afovoany, ampiasain’ny olona an-tapitrisany — dia efa manana ny andro ho azy manokana! → “Nambara ho Andro Manerantany ho an'ny teny Kiswahili ny 7 Jolay; Tetikasa vaovao iray mikasa hahatakatra tsara kokoa ny karazan-tenim-paritra Swahili”
HIRIKA | VATSIM-PIANARANA SY FANOHANANA ARA-BOLA
Mandray ny fangatahana ho an'ny Fandaharan’asa Fihaonan-Kolontsaina 2022, izay mikendry ny hanamafisana ny fiarahamonim-pirenena amin'ny alàlan'ny fifanakalozana ara-kolontsaina mahasoa eo amin'ireo mpisitraka vatsim-pianarana sy ny fikambanana mpampiantrano azy ireo ny Institut für Auslandsbeziehungen. Azo jerena eto ny antsipiriany fanampiny sy ny fepetra takiana. Fe-potoana farany: 31 Janoary 2022
FIFANINANANA SY FIFANITSANANA
Mikatsaka ny hampandroso ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fanamby eo an-toerana, ny African Union Civic Tech Fund dia manao antso amin’ny tolo-kevitra mikasika ny hetsika vaovao manerana ny kaontinanta. Raha mila torolalana handraisana anjara amin'ity fifaninanana ity dia tsidiho azafady ny tranokalany. Fara-fandraisana anjara: 16 Janoary 2022
Mizara ny hevitr’i Antonio Pizzigati ao anatin'ny fampiasan-tsolosaina open source – loharano misokatra – ho an'ny tombontsoan’ny daholobe ve? Mandray an-tanandroa ny fangatahana avy amin'ny tsirairay, ny ekipa na ny fikambanana ny Loka Pizzigati – miaraka amin'ny fiantraikany hita maso – hankalazana ny fandraisany anjara miaraka amin'izao tontolo izao! Misy antsipiriany fanampiny azo jerena eto. Fe-potoana farany: 28 Janoary 2022
HETSIKA HOAVY SY FIHAONAMBE
Efa mihaodihaody ny MozFest 2022! Tianao ve ny hanatevin-daharana ireo olona mitovy saina amin'ny tontolo nomerika (ankihy) amin’ny lafiny maha-olombelona kokoa amin'ity hetsika fanaon’ny Mozilla isan-taona ity? Azonao atao ny mividy ny tapakilanao mialoha amin'ny sandan'ny Pay What You Can eto ary manaraka ny fanavaozana eto.
Amin'ny fanombohana ny Folo Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Fiteny Indizeny 2022–2032, manasa anao hiaraka amin'izy ireo ny Tetikasan'ny Teny Tandindomin-doza amin'ny hetsika virtoaly mandritra ny 10 andro, izay hizaran'ireo mpamelona ny fiteny hevi-baovao avy amin'ny asa teo aloha ary koa ny vina ho an'ny folo taona manaraka. Eto ny fampahafantarana momba ny hetsika sy fisoratana anarana maimaim-poana. Daty: 14–23 Janoary 2022
HAMAKY BEBE KOKOA, HIJERY ary HIHAINO
Dinika miaraka amin'ny Rising Voices sy ny Living Tongue araka ny atolotry ny Living Tongues Institute amin'ny alàlan'ny Instagram
Famelomana ny tenindrazana: Lisitry ny fiteny indizeny amin'ny amin'ny alàlan'ny Folklife
Amin'ny fankalazana ny maherifo ao an-toerana, manome modely ho an'izao tontolo izao i Bali amin'ny alàlan'ny Folklife
Misoratra anarana amin'ny Gazety Rising Voices
Misaotra an'i Eddie Avila sy Ameya Nagarajan nandray anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.
Azia Atsinanana 18 ora izay
Mahomby ve ny vaksiny COVID-19 novokarin'i Torkia